बैंकबाट लाखौं चोरी गर्ने गिरोहसंग सक्कलै चेक बुक, बैंककै कर्मचारी संलग्नताको आशंका !
बैंकबाट लाखौं चोरी गर्ने गिरोहसंग सक्कलै चेक बुक, बैंककै कर्मचारी संलग्नताको आशंका !
काठमाडौं - महानगरीय प्रहरी प्ररीसर काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कीर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकाल्ने ६ जनाको समूहलाई सार्वजनिक गर्‍यो । यो समूहले नक्कली हस्ताक्षर गरेर बैंकहरुबाट चेकबुक र एटीएम कार्ड लिने र उनीहरुको पैसा निकाल्ने गर्दै आएको थियो ।
मिश्रका अनुसार बैंकले सुरुमा खाता रोक्का गर्‍यो र कसरी रकम निकालियो भन्ने अध्ययन थाल्यो ।
२ बोरा कागजपत्र बरामद
प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरु १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद मात्र बरामद गरेको छैन, करिब दुई हजार नागरिकताको प्रतिलिपी, हस्ताक्षर कपी गर्न अभ्यास गरिएको रजिष्टर, विभिन्न व्यक्तिहरुको खाताबारे जानकारी लेखिएको डायरी, बैंक स्टेमेन्ट लगायतका सामाग्रीहरु बरामद गरिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न बैंकमा खाता भएका व्यक्तिहरुको सक्कलै चेक बुक बरामद भएको छ । प्रहरीका अनुसार यो समूहबाट बरामद भएको कागजपत्र मात्र करिव २ बोरा छ । यतिठूलो परिमाणमा सक्कल कागजात पक्राउ पर्नुले ठूलो गिरोह संलग्न रहेको र मूख्य नाइके अरु नै हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।